चलचित्र रिलिजमा दुविधा ! «
चलचित्र रिलिजमा दुविधा !
Published : 26 April, 2020 10:16 am
कोरोनाका कारण नेपाल लकडाउनमा छ । लकडाउन अगवै चलचित्र हलहरु बन्द भइसकेका थिए । रिलिजको तयारीमा रहेका चलचित्रहरु रिलिज हुन पाएनन् ।
अहिले लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने पक्का भइसकेको छैन । लकडाउन खुले पनि हलमा तत्काल चलचित्र रिलिज गर्ने माहोल बन्दैन । चलचित्र चल्नको लागि केही समय कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।
हल संचालनमा आएपछि कुन चलचित्रलाई कुन मितिमा रिलिज गर्ने भन्ने अर्को दुविधा सुरु भएको छ । रिलिजको लागि पूर्ण तयार भएका चलचित्रलाई कुन मितिमा रिलिज गर्ने, बाकीँ चलचित्रलाई कुन मितिमा रिलिज गर्ने भन्ने अन्योलको विषय छ ।
रिलिजको तयारीमा रहेको ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’, ‘नीरफूल’, ‘प्रेम गीत ३’, ‘चपली हाइट ३’, ‘लक्का जवान’ लगायत चलचित्र पछि सरेका छन् । अब यी चलचित्रहरुले कसरी आफ्नो रिलिज मिति टुंगो लगाउन् त ? त्यो बहसको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्षित यी चलचित्रले राम्रो मिति छानेर रिलिज नगरे घाटा हुने पक्का छ । यी चलचित्र एक-आपसमा जुध्न पुगे भने पनि उनीहरुलाई घाटा नै हुनेछ । त्यसैले वितरकसँग छलफल गरेर यी चलचित्रहरुले उत्तम मिति तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।